सी स्ट्याक: यो के हो, विशेषताहरु, गठन र तिनीहरू कहाँ छन् | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 10/11/2021 11:01 | Divulgation
तटहरूमा र समुद्रहरूमा हामीले विशेष विशेषताहरू सहित विभिन्न भौगोलिक रूपहरू भेट्टाउँछौं। ती मध्ये एक हो समुद्री स्टक। यो एक चट्टान स्तम्भ हो जुन किनारको नजिक पानी मिल्छ। तिनीहरू सारा संसारको तटहरूमा सामान्य छन्। अङ्ग्रेजीमा यसलाई सी स्ट्याक भनिन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई कसरी राम्रोसँग पहिचान गर्ने भनेर जान्नुपर्छ किनभने तिनीहरूले नाविकहरूका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छन्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई समुद्री स्ट्याकको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउन जाँदैछौं, यसको विशेषताहरू र गठन के हो।
1 समुद्री स्ट्याक के हो
3 समुद्री स्टक को गठन
4 तिनीहरू कहाँ देख्न सकिन्छ?
समुद्री स्ट्याक के हो
समुद्री स्टकहरू किनारको नजिक पानीमा पाइने चट्टान स्तम्भहरू हुन्। समुद्री स्तम्भहरू संसारका धेरै तटहरूमा सामान्य छन्, र केही पनि धेरै प्रसिद्ध छन्। तटमा पाइने अन्य विशेषताहरू जस्तै, समुद्री ढिस्कोहरू पनि निरन्तर प्रवाहको स्थितिमा छन्, नयाँ समुद्री टिलाहरू लगातार देखा पर्छन् र पुरानाहरू हराउँदैछन्। यो राम्रोसँग थाहा छ कि केहि समुद्री स्ट्याकहरू धेरै असामान्य र आकर्षक तहहरूमा मेटाउन सक्छन्, तिनीहरूलाई फोटोग्राफर र चित्रकारहरूको लागि एक लोकप्रिय विषय बनाउँछ।
तटीय हेडल्याण्डहरूको प्राकृतिक क्षरणका कारण समुद्रको संचय हुन्छ। सामान्यतया, समुद्रले पहिले स्रोतमा प्वाल प्रयोग गरी चाप बनाउँछ जुन समयसँगै बिस्तारै विस्तार हुन्छ। अन्ततः आर्क भत्किन्छ, एकातिर समुद्री स्टक र अर्को छेउमा प्रोमोन्टरी छोड्छ। किनारबाट अलग भएपछि, समुद्रको थैला बिस्तारै क्षय हुन थाल्छ, पानीमा पग्लिन्छ वा पतन हुन्छ।
संक्षेपमा, समुद्री स्ट्याक एक धेरै सानो टापु जस्तै छ। केही अवस्थामा, समुद्री स्ट्याक वास्तवमा टापुको भाग हो जुन टाढा लगाइएको छ। धेरै प्रवासी चराहरूले गुँड र आश्रयहरू बनाउन समुद्री स्टकहरू प्रयोग गर्छन् र तिनीहरू आफ्नो अलगाव र सापेक्ष सुरक्षाको कदर गर्छन्। सी स्ट्याकहरू पर्वतारोहीहरूसँग धेरै लोकप्रिय छन्, किनभने तिनीहरूमध्ये धेरैले रोचक चुनौतीहरू ल्याउँछन्।
प्रमोन्टरी बन्ने चट्टानको प्रकार, वातावरणीय र मौसमी अवस्था र प्रचलित धाराहरूमा निर्भर गर्दै, कुनै क्षेत्रमा समुद्री स्टकहरूको वितरण भिन्न हुन्छ। कतिपय अवस्थामा, कुनै क्षेत्र धेरै कडा ढुङ्गाले बनेको समुद्री ढेरले भरिएको हुन सक्छ, जबकि अन्य अवस्थामा, तटरेखामा चूना ढुङ्गा र बलौटे ढुङ्गा जस्ता नरम र भंगुर सामग्रीबाट बनेका केही थुप्रोहरू मात्र छन्। धेरै स्रोतहरू पुरातन समुद्री बेडहरू मिलेर बनेको हुनाले, केही समुद्री स्ट्याकहरूले क्षरण प्रक्रियाको क्रममा रोचक जीवाश्म अवशेषहरू पनि देखाउनेछन्।
समुद्रको नजिक हुँदा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न सिफारिस गरिन्छ। ढुङ्गा अकस्मात ढल्न सक्छ, जसले नजिकै उभिने वा नेभिगेट गर्ने जो कोहीलाई चोट पुर्याउन सक्छ। समुद्री ढिस्को चढ्दा, नरम र भंगुर चट्टानहरूमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ, जुन पर्वतारोहीको तौलमा डुब्न सक्छ, र विशेष गरी साँघुरो र पातलो समुद्री ढेरबाट बच्नुहोस् किनभने तिनीहरू धेरै कमजोर हुन सक्छन्। थप रूपमा, किनकी चराहरूले समुद्री स्ट्याकहरू गुँड क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्, सुरक्षा एजेन्सीहरूले चराहरूको सुरक्षा गर्न समुद्री स्ट्याकहरूमा पहुँच प्रतिबन्धित गर्न सक्छन्।
समुद्री स्टक को गठन
यसको गठनको लागि सबै समुद्री स्ट्याकहरू चट्टान, थोरै पानी, र धेरै समय हो। हजारौं वा लाखौं वर्ष, वास्तवमा।
La तटीय क्षरण वा पानी र हावा द्वारा चट्टानको ढिलो क्षरण लामो समय को लागी एक थुप्रो बनाउँछ। सबै समुद्री स्टकहरू नजिकैको चट्टान संरचनाहरूको भागको रूपमा सुरु हुन्छ। हावा र छालहरूको सहस्राब्दी चट्टानमा ठोक्किन्छ र यसलाई भाँचिन्छ। दुईको बलले ढुङ्गामा दरारहरू सिर्जना गर्दछ र बिस्तारै, दरारहरू मुख्य चट्टानबाट खस्ने स्प्लिन्टरहरूमा परिणत हुन्छन्।
जब पर्याप्त चिपहरू छोडिन्छन्, प्वालहरू सिर्जना हुन्छन् जुन चट्टानको एक छेउबाट अर्कोतिर फैलिन्छ। अन्ततः हावा र पानीले अर्को छेउमा आफ्नो बाटो बनाउँछ, गुफा वा आर्क सिर्जना गर्दछ। धेरै पुस्ताहरूका लागि, यो आर्क पनि झर्छ, चट्टानको एक भागलाई मूल चट्टानबाट अलग गर्दै। यो तपाईंको समुद्री स्टक हो।
कालान्तरमा यो पनि टुट्छ, के कारणले ढिलो भत्किन्छ, समुद्री स्टम्प भनेर चिनिने कुरा छोडेर। कुनै पनि थुप्रो स्टम्पमा परिणत हुन सक्छ किनकि पानी यसको आधारबाट फुट्छ, त्यसैले पर्वतारोहीहरूले पाइल्सलाई सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ।
तिनीहरू कहाँ देख्न सकिन्छ?
समुद्री स्ट्याकहरू सबै सात महाद्वीपहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, प्रत्येकले तिनीहरू बनाइएका तरिकामा सूक्ष्म भिन्नतालाई हाइलाइट गर्दछ। उदाहरणका लागि, लागोस, पोर्चुगलमा समुद्री स्टकहरू तलछट चट्टानबाट बनाइएको थियो, विभिन्न प्राकृतिक सामाग्रीहरु संग एक सुन्दर खरोंच प्रभाव प्रदान गर्न को लागी संयोजन। यद्यपि, यो चट्टान अस्थिर र भंगुर छ, जसको मतलब कोमल छालहरूले पनि क्षरण प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ।
युरोपमा पनि, स्कटल्याण्डको ओर्कने टापुको मुख्य टापुमा डरलाग्दो देखिने उत्तर गाउल्टन क्यासल छ। यसले लामो समयदेखि महत्वाकांक्षी पर्वतारोहीहरूलाई आकर्षित गरेको छ, किनकि यो तलभन्दा माथिभन्दा धेरै फराकिलो छ। अन्य प्रभावशाली उदाहरणहरू दक्षिण अमेरिका (गालापागोसमा), उत्तरी अमेरिका (न्यूफाउन्डल्याण्ड, क्यानडा), एशिया (फाङ नगा बे, थाइल्याण्ड), र आर्कटिक वरपर र विक (आइसल्याण्ड) र फारो टापुहरू जस्ता देख्न सकिन्छ। ।
यी केही प्रभावशाली समुद्री स्ट्याकहरू हुन् जुन संसारभरि फेला पार्न सकिन्छ। आखिर, चट्टान संग कुनै पनि ठाउँ र समुन्द्रले समयसँगै एउटा सिर्जना गर्न सक्छ, र चील-आँखा पर्यटकहरूले तिनीहरूलाई सबै सात महाद्वीपहरूमा देख्न सक्छन्।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हाम्रो ग्रहमा तपाईले विभिन्न भौगोलिक संरचनाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन बन्न हजारौं वर्ष लाग्छ। यद्यपि, तिनीहरू मानव कार्यद्वारा केही मिनेटमा नष्ट गर्न सकिन्छ। मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले समुद्री स्ट्याकको बारेमा थप जान्न सक्नुहुन्छ, यसको विशेषताहरू के हुन् र तिनीहरू कसरी गठन हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » समुद्री स्टक